Tababare Quique Setien Oo Badalay Dhaqankii Valverde Ee Barcelona Iyo Arimihii Guardiola Oo Uu Soo Celiyay. - Gool24.Net
Tababare Quique Setien Oo Badalay Dhaqankii Valverde Ee Barcelona Iyo Arimihii Guardiola Oo Uu Soo Celiyay.
January 16, 2020 Mahamoud Batalaale
Maamulka kooxda Barcelona ayaa dhawaan Quique Setien u doortay badalkii Ernesto Valverde oo shaqada kooxda laga caydhiyay, wuxuuna Setien haddaba u muuqdaa in uu si buuxda u bilaabay isbadalkii laga doonayay.
Haddii ay maamulka Barcelona doonayeen in Quique Setien uu isbadal ku sameeyo xaaladii ay kooxdoodu ku soo jirtay waqtiyadii ugu danbeeyay ee Valverde, waxa uu haddaba Setien cadeeyay in uu yahay shaqsigii xaaladan badali lahaa.
Quique Setien ayaa soo celiyay dhaqankii hore ee Barcelona ee xiligii Pep Guardiola wuxuuna meesha ka saaray qaabkii uu Valverde kooxda u maamulayay.
Jadwalka Barcelona ee tababarka kooxdeeda ayaa lagu xaqiijiyay in Quique Setien uu gabi ahaanba adalay qaabkii uu Valverde tababarka u bixinayay gaar ahaan maalmaha kulamada la ciyaarayo.
Barcelona waxay axada soo dhawayn doontaa kooxda Granada marka ay saacada geeska Afrika tahay 11:00 habeenimo laakiin waxa uu Quique Setien sameeyay in subaxnimada axada ay tababar samayn doonaan taas oo gabi ahaanba ka duwan qaabkii uu Valverde u shaqayn jiray.
Quique Setien waxa uu subaxnimada axada ee kulanka Granada uu ciyaartoyda kooxdiisa siin doonaa tababar ay kaga shaqayn doonaan taatikada uu doonayo in ay ku ciyaaraan, waana arin ay Barca soo lahayd waqtigii Guardiola.
Pep Guardiola waxa uu subaxnimada maalmaha kulamada ay ciyaarayaan uu Barcelona siin jiray tababar uu ciyaartoyda kooxdiisa ugu sharixi jiray taatikada ay kooxda ay la ciyaarayaan kaga hor tagayaan, waana dhaqan uu Quique Setien soo nooleeyay.
Quique Setien waxa uu subaxnimada axada bixin doonaa tababar ku salaysan taatikada kulankiisa ugu horeeya ee Barca waana arin uu ku badalay dhaqankii Valverde ee Barcelona.
Inkasta oo Quique Setien uu wali ka shaqaynayo sidii uu ku ogaan lahaa shaxdiisa ugu fiican ee uu heli karo kulanka Granada, waxa uu jadwalka shaqadiisu cadeeyay in si ka duwan qaabkii Valverde uu tababar taatikada ah bixin doono isla maalinta ay Granada la ciyaarayaan.